'Faashiniin Damboobaa' dubartoota hedduun jaallatamaa jiru kami? - BBC News Afaan Oromoo
'Faashiniin Damboobaa' dubartoota hedduun jaallatamaa jiru kami?
Image copyright Jodie Marriott-Baker / Asha Mohamud
Goodayyaa suuraa Jodii Maariyoot-Beekar [Bitaa] fi Aashaa Mohaammud [mirga]
Waandaboo hanga koronyootti dheeratu, surree babal'aa...
Kun 'faashinii damboobaa' ta'edha.
Jechama kana dhageessanii hin beektan yoo ta'e, kun haala ammayaa'een uffannaa qaama guutessa ta'e uffachuu jechuudha.
Karaa ammayaa'ee damboobaa ta'een uffachuun shamarran Musliimaa birratti kan beekame yoo ta'eyyu uffannaan kun kan amantaa kamiinuu daangeeffame miti.
Ammammoo caalaatti beekamaa jira.
Skip Instagram post by just.ashaa
@tyrabanks taught me to smize 💕
A post shared by 🌹💍a (@just.ashaa) on Sep 16, 2019 at 11:44am PDT
End of Instagram post by just.ashaa
Image Copyright just.ashaa just.ashaa
"Faashiniin damboobaa caalaatti hirmaachisaa ta'aa jira," jechuun shamarreen ganna 21, biloogariifi moodeelii taatee Inistaagiraamii [Instagram] gubbaarratti hordoftoota 27,000 qabdu, Aashaa Mohaammud ni dubbatti.
"Akka ani yaadutti amma dubartoonni dhiraaf bareeduuf hin uffatan - ofiif bareeduuf malee," jechuun BBC Newsbeat'tti himteetti.
"Kana booda uffannaa harma ol dhiibu caalaa - uffannaa gutuu ta'uu danda'a".
Skip Instagram post by jodielouisemb
Hell i’m addicted to wearing vans and using my red bag 😨 [gifted bag] #fblogger #fashionblogger #londonblogger #under10k #midsize #midsizestyle #midsizefashion #averagegirlsize
A post shared by Jodie Marriott-Baker (@jodielouisemb) on Oct 24, 2019 at 10:30am PDT
End of Instagram post by jodielouisemb
Image Copyright jodielouisemb jodielouisemb
Moodeeliin faashinii waltajjiirratti osoo agarsiisaa jiruu du'e
Dizaayinoota Paarisii, Niwuyoorki fi kan biyyoota biroo gara Finfinnee
Biloogariin faashinii Jodii Maariyoot-Beekar miidiyaa hawaassummaafi yaadotiin geddaramaa jiraachuun namooti maqaa fashiiniin uffannaa qaamaa hin mul'isne jallaachaa akka dhufaniif sababa ta'eera.
"Kana booda akka fashiinii namooti dullooman uffatanitti hin ilaalamu," jetti.
"Rogeessoti faashiinii Inastagiraamiirra jiran uffanaa toluu fi eenyuyyu uffachuu danda'u akka ta'e agarsiisaniiru."
Geeddaramsa kana biloogaroota qofaammo miti.
Akka gabaasaa daldalaatti maamiloonni suuqii biyya Biriteen damee heddu qabu 'John Lewis', uffannaa " garmalee nama qabuufi nama dhiphisurra" uffannaa "dheerina qabuufi dhaqnatti hin maxxanne" filachaa jiru.
Kun suuqii John Lewis qofaan kan shaakalam miti, suuqootiin hedduu gurgurtaa uffanaa damboobaa guddisaa jiru.
Isaan keessa kan milkaa'ina guddaa qabaate tokko suuqii Ispeen Zaaraadha
Biloogarooti faashinii sababa uffannaa dheeraa fi babal'aa qabuun suuqii kana akka faakkeenyaa faashinii damboobatti fudhachuun, sababa barbaadamni isaa hedduu dabaleef faashiniin kun "intarneeta cabse" jechuun ni qoosu.
Shamarreen Musliimaa Aashaa, "faashiniin damboobaa namaa namatti adda," jettee amanti.
"Faashiniin damboobaa Musliimaa ta'uurra kan darbeedha. Kana booda amantaa waliin wal hin qabatu. Faashinii haaraadha."
Skip Instagram post 2 by just.ashaa
A post shared by 🌹💍a (@just.ashaa) on May 27, 2019 at 12:10pm PDT
End of Instagram post 2 by just.ashaa
‎Fashiiniin kun dhimma gudda waan ta'ee jiruuf eejansooti moodeelii shammarree moodeelii faashinii damboobaa kana uffataaniif qofaaf addatti hundeeffaman ni jiru.
Dhaabata 'Umma Models' kan hoggantu Shaamii Hammuudaa, barri 2020 waggaa faadhiiniin damboobaa sadarkaa olaanatti guddatu jettee amanti.
Daldala ishee waggaa tokko dura yeroo eegalte maamiltoota afur qofa qabdi ture, amma garuu 60 ol bakka buuti.
"Namootni jireenya isaani guyya guyyaa keessatti damboobumma yeroo fayyadaman ni agarta, midiyaalee keessatti garuu bakka bu'umsa hin qabu. Kana booda aadaa ta'a jedheen hawwa," jetti.
Faashiniin damboobaa waggootiif hedduuf kan ture kan jetti Shaamiin.
" Biriteen bara 1950'n keessa yoo deebinee ilaallee faashiniin damboobaa aadaa ture. Namni hundi wanta harka guutuufi hanga koronyootti dheeratu uffata ture," jechuun BBCtti himteetti.
Goodayyaa suuraa Faashinii bara 1950'n
Teels So'aares: Moodeelichi Torbee Faashinii Saa'oo Pooloorratti du'e
Shamarree Tigraay uffata haadha Siqqeen dorgommii miidhaginaa Xaaliyaanitti mo'atte
5 Sadaasa 2019
Finfinnee: Torban Diizaayinaa magaalaa Finfinneetti gaggeefamaa jira
MM Abiy Ahimad miidiyaatti dubbachuu diduun 'rakkoo guddaadha' - Koree Noobeelii
Itoophiyaa waggaa 20 booda, hireewwan afran
Shiinii bunaa nyaatamu beektuu?